Takelaka hoditra tamin' ny taona 1768 nataon' i Jekuthiel Sofer izay maneho ny Didy Folo tamin' ny taona 1675 tao amin' ny Sinagoga Esnoga ao Amsterdam.
2 Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta, tamin' ny trano nahandevozana.
4 Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin' ny lanitra ambony, na izay etỳ amin' ny tany ambany, na izay any amin' ny rano ambanin' ny tany.
5 Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin' ny zanaka hatramin' ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy;6 nefa kosa mamindra fo amin' ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.
6 Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta, tamin' ny trano nahandevozana.
8 Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra any amin' ny lanitra ambony, na izay etỳ amin' ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin' ny tany.
9 Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin' ny zanaka hatramin' ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin' izay mankahala Ahy, 10 nefa kosa mamindra fo amin' ny olona arivo mandimby, izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.
Misy fahasamihafana ny lahatsoratra roa avy ao amin' ny Baiboly. Isan' ny misongadina ny mikasika ny Sabata. Ampiasaina ny teny hoe Mahatsiarova (hebreo: zakhor) ao amin' ny Eksodosy, ary Mitandrema (hebreo: chamor) kosa raha ao amin' ny Deteronomia. Toy izany koa ny didy farany mikasika ny Fitsiriritana.
Araka ny lahatsoratra avy ao amin' ny Eksodosy, dia mihoatra ny folo ny fitambaran' ireo fehezanteny misy ny teny hoe "Aza" sy ny matoanteny amin' ny filaza mandidy toy ny hoe mitandrema. Araka ny Baiboly anefa dia folo ihany ny Didy. Noho izany dia samy manana ny fomba amaritany ny didy tsirairay ny fiangonana isanisany. Hita etsy ambany ny ohatra maneho ny fahasamihafana misy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Didy_Folo&oldid=1043058"
Voaova farany tamin'ny 17 Janoary 2022 amin'ny 15:05 ity pejy ity.